Ungayithola kanjani isofthiwe ye-search ye-Amazon yomsebenzi?
Wonke umuntu ongathanda ukukhipha inzuzo yakhe ngokushesha ku-Amazon kufanele abe ne-software ye-Amazon yomkhiqizo wokuhlola ngomkhiqizo onawo. Uma ibhizinisi lakho likhula njalo, udinga ukuphatha izakhi ezahlukene ze-e-commerce, kufaka phakathi intengo, ukuphazamiseka kwezimali, intela, intela, ukuthumela, uhlu, izinkokhelo, ukukhangisa, ukwesekwa kwamakhasimende, njalonjalo. Yingakho kunengqondo ukuba nethuluzi lokusekela kulo lonke uhlobo lwe-Amazon e-commerce umsebenzi. Ukuhlanganisa imizamo yakho kuzokusiza ukukhulisa ama-rankings akho e-Amazon futhi ukwandise imali yakho yebhizinisi jikelele.
Kulesi sihloko, uzothola uhlu lwamathuluzi e-Amazon FBA awusizo olwenzelwe ukukusiza ukuphakamisa izinga lakho lomkhiqizo ekhasini lekhasi le-Amazon kanye nokwandisa imali yakho yonke. Ngakho ake siqhubekele manje.
Uhla lwe-software ye-professional Amazon search software
kufanele ulandele ngokuqhubekayo izindleko zomkhiqizo wakho futhi unikeze amakhasimende akho ukuncintisana kakhulu kumanani wakho we-market niche. Kuzobe uthatha ukuthengisa okungaphezulu futhi uthenge amabhokisi. Kodwa-ke, ukuhlola ngesandla wonke amanani emakethe kungaba nzima kunomuntu oyedwa. Kuzodingeka ukuthi uqashe abahlaziyi basekhaya noma usebenzise elinye lamathuluzi angcono kakhulu wokubhalisa. Leli thuluzi lizokusiza ukwandisa ukuthengiswa kwakho kwe-intanethi futhi uthuthukise inzuzo yakho yebhizinisi jikelele ngokusebenzisa amanani okuncintisana. Njengoba wazi, intengo enengqondo iyinto ebalulekile yokudayiswa kwezinto ezihamba phambili ezisiza abathengisi be-intanethi bathathe ibhokisi lokuthenga ku-Amazon. Ungakwazi ukwenza ngokuzenzakalelayo amasu akho wamanani ngemithetho eyisisekelo neyaphambili, usethe amanani amancane namaphesenti amaningi ukuze usebenzise izinguquko kumanani entengo.
Njengomthengisi onthanethi, kufanele ucabange ngokuthengisa kwakho nezinye izinqubo ezahlukene ze-e-commerce. Yilapho uyingcweti..Noma kunjalo, ukuthengisa akukwazi ukuphuma kunoma yikuphi. Ukuheha ithrafikhi emikhiqizweni yakho e-Amazon, kufanele usebenze ekuhlelweni kwakho kokufakwa ohlwini nokubonakala kwayo ku-Google SERP. Semalt Amazon SEO isebenza ukwenza lo msebenzi kuwe ngendlela enhle kunazo zonke futhi enomphumela. Ukusebenzisa leli thuluzi, uzothola ithrafikhi ye-Google ekhasini lakho le-Amazon, ukwandisa ukuthengisa kule platform ngokusebenzisa usizo lwabasebenzisi abaseshayo. I-Semalt SEO ochwepheshe baphakamise izinga lakho lekhasi le-Amazon lisebenzisa ubuchwepheshe obuyingqayizivele yesakhiwo esikhulu se-backlink. Ekugcineni, bazokwenza i-Google ihlobanise ikhasi lakho lomkhiqizo ngemishwana eyinhloko oyidinga ukuphoqa isitolo sakho kwimiphumela yokusesha TOP.
I-AMZTracker iyithuluzi elisiza ukuphakamisa ukuthandwa komkhiqizo wakho nokuqwashisa umkhiqizo ku-Amazon ngokusebenzisa umphakathi wamadili we-Vipon. Le platform yithola inani labathengi nsuku zonke. Uma ungeza imikhiqizo yakho kule platform yokuthenga, uthola isikhukhula sabathengi abasha, okungasondeza isivinini sakho sokuthengisa. Le mikhiqizo cishe iyoba nezinga eliphezulu kakhulu lokudayiswa isikhathi esilula.
Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lizokusiza ukwandise ibhizinisi lakho le-Amazon likunikeze umsebenzi wocwaningo olunzulu lomkhiqizo. Ukuze uphumelele kule platform yokuhweba, kufanele njalo ubuke izinto ezintsha ezihlobene niche zokuthengisa. Ithuluzi le-AMZTracker lizokusiza ukuba ubone imikhiqizo emisha yokuthengisa futhi ikunike ulwazi mayelana nezimakethe ezishisayo ezinokuncintisana okuncane Source .